कोल्ड रोल्ड स्टील शीट कोइल, जस्ती स्टील शीट कोइल - रुईआई
तपाईंको सन्तुष्टि, हाम्रो मिशन
अर्डर अनुरोध गर्नुहोस्
उत्पादनहरूको फराकिलो दायरा प्रदान गर्दछ
AS १7 77 G550 (HRB> = 85), ASTM A6aets
बाहिरी पर्खालहरूको लागि ठूलो शून्य स्प Hot्गल तातो डूबा गाल ...
एल्युमिनियम चेकर्ड प्लेट
3003 एल्युमिनियम हीरा ट्रेड प्लेट
१०50० एल्युमिनियम पाना
प्रीमियम चीन एल्युमिनियम चेकर्ड प्लेट पाना ...
तातो बिक्री कम मूल्य एल्युमिनियम मिश्र प्लेट
जिओक्सियन रुईआई वाणिज्यिक ट्रेड कं, लिमिटेड
हामी एक ग्राहक उन्मुख, नवीन र मूल्य चालित विनिर्माण आपूर्तिकर्ता र चीन मा बनेको कच्चा माल को व्यापारी हो।
हामी बाओस्टील, एन्स्टील र केही निजी स्टील कम्पनी बेच्ने चिसो रोल्ड स्टील शीट कोइल / एसपीसीसी, गेल्भनाइज्ड स्टील शीट कोइल / एसजीसीसी, गल्वाल्युम स्टील शीट कोइल / अल्युजिनिक स्टील कोइल, प्रि-पेन्टेड गॅल्वनाइज्ड स्टील कोइल / पीपीजीआई, कोल्ड रोल्ड गैरको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछौं। अन्न उन्मुख स्टील / CRNGO, र एल्युमिनियम पानाका तारहरू।
हामी केवल इस्पात सामग्री बेच्ने छैन तर चीनबाट कस्टम सोर्सि service सेवा पनि प्रदान गर्दछौं
Xiaoxian रुई वाणिज्यिक ट्रेड कं, लिमिटेड चीन मा एक अग्रणी व्यापक इस्पात निर्माता हो।
एल्युमिनियम प्लेट मोडल स्पेसिफिकेशन परिचय ...
धातु एल्युमिनियम प्लेट कति किसिमका छन्? यो कहाँ प्रयोग भएको छ? जब हामी एल्युमिनियम लिनिन्छन्, हामी प्राय: ११०० एल्युमिनियम प्लेटहरू कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्दछौं। त्यसो भए वास्तवमै यी एल्युमिनियम प्लेट मोडेलहरू के गर्छन् ...
Alumi को सतह स्क्र्याच उपचार विधि ...
धातु एल्युमिनियम प्लेट कति किसिमका छन्? यो कहाँ प्रयोग भएको छ? एल्युमिनियम प्लेटहरूको सतहमा खरोंचहरू एल्युमिनियम प्लेट प्रशोधनको प्रक्रियामा हुने बढी सम्भावना हुन्छ। यो प्राय: ईम्प्रोपको कारणले हुन्छ।